संघीयताको अनुभूति दिलाउने अवसर « News of Nepal
संघीयताको अनुभूति दिलाउने अवसर
सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाममा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आइतबार शपथ ग्रहण गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको झन्डै डेढ महिनापछि प्रदेशसभाका सदस्यहरुले शपथ ग्रहण गरेका हुन् । यससँगै मुलुक औपचारिकरुपमा प्रदेशको संरचनामा गएको छ । यससँगै लामो समयदेखि केन्द्र्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुकको राज्यशक्ति एक तह तल गएको छ । अब प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउँदै सेवाप्रवाह, समतामूलक विकासका लागि अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको काधँमा आएको छ ।
संविधानले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ । सोही अनुरुप राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संरचना प्रदेश अस्तित्वमा आएको हो । सरकारले निकै ढिला गरी प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेकाले प्रदेशसभाका सदस्यहरुको शपथ ग्रहणमा निकै ढिलाइ भएको थियो । तर जे–जस्तो अवस्था रहे पनि प्रादेशिक स्वरुप दिने कार्यमा अब हतार गर्नुहुन्न ।
सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्थान मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहनेछन् । यसका लागि पर्याप्त कार्यालय, अन्य पूर्वाधार र जनशक्ति आवश्यक पर्छ । व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले गरेको एक अध्ययनमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि मात्रै पनि एउटा प्रदेशमा ४७ जना स्थायी कर्मचारी र २० जना अस्थायी⁄करारका कर्मचारी आवश्यक पर्ने ठहर गरेको छ । सबभन्दा कम प्रदेश नं. ७ मा ५३ र सबभन्दा बढी प्रदेश नं. ३ मा ११० प्रदेशसभा सदस्य रहनेछन् । यसबाहेक प्रदेश सरकारले दिने सेवा सञ्चालनका लागि धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्छ । ऐन, कानुन निर्माणमा ढिलाइले गर्दा स्थानीय तहमा निवार्चित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि लामो समयसम्म काम गर्न नपाएको अवस्था रहेको छ ।
निर्वािर्चत पदाधिकारी आइसकेपछि सहज र नियमितरूपमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने वातावरण तयार हुन आवश्यक छ ।
संविधानअनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसै गरी ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र पहिलो बैठक भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । एक महिनाभित्र गठन हुने प्रदेश सरकारसँग संविधान र कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा हुनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको व्यवस्थापनसँगै चलायनमान बनाउने जिम्मेवारी प्रदेशसभा सदस्यहरुको रहनेछ । प्रदेशसभा सदस्यहरुले गर्ने प्रत्येक कामबाट जनताले संघीयताको अनुभूति गर्नेछन् । त्यसैले अब देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो कामबाट संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने अभिभारा सरकार, राजनीतिक दलसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरुको रहेको छ ।
प्रमको इच्छाशक्ति विपरीतका पाइलाहरू
गाउँ रित्तिन नदेऊ
डा. केसीको जीवन रक्षा गर
मन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर
सम्पदा पुनःनिर्माणको सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने
पुरानोको दाँजोमा नयाँको माग
मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरबारे पुरातत्वको उदासिनता
पुनःनिर्माण बुझ्न पाटन पुगे प्रधानमन्त्री
अर्मपर्मबाट सुरक्षित पुनर्निर्माण
आमाको अन्तिम वाक्यांशले क्यान्सर विशेषज्ञ नै..
५ नम्बर प्रदेशमा गाडी खरिद प्रकरणः माननीयले गाडी फिर्ता गरे अनि अटो रिक्सा चढेर घर फर्किए
विदेशमा लुकाईएको सम्पत्ति छानविन गर्न राप्रपाको..
प्रधानमन्त्रीको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणः मुलुकको आर्थिक विकासमा..
विकासप्रतिको जनआकाङ्क्षा बढेको छ : प्रधानमन्त्री..
बजार क्षेत्रमा जडान गरेका सीसी क्यामेरा..
९७ वर्षीय वेलायती राजकुमार फिलिप्सले चलाएको गाडी दुर्घटना
तयार भयो २०७६ सालको पात्रो
१९ वर्ष देखी फरार प्रतिवादी समातिए
वाइडबडीमा के भयो सहमति ? सांसद्को प्रश्न सोझो, प्रधानमन्त्रीको जवाफ घुमाउरो
इयूद्वारा अमेरिकासँग ‘सीमित’ व्यापार सम्झौता गर्ने योजना
ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई स्वागत गर्ने भियतनामी प्रधानमन्त्रीेको इच्छा